トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ulwazi oluqoqwe usebenzisa magazini pachinko
Ukuze kini ukuthi pachinko, ngicabanga ukuthi abanye abantu, okuyinto ukuba lifundwe umagazini pachinko. Eminyakeni yamuva, hhayi kuphela umagazini esikhokhelwayo, iphepha ezamahala, njll ngokuhlanganyela kwenzeka futhi baphumile eziningi. iphepha Mahhala, ngoba Nowak mahhala bese uya sasemakhazeni pachinko, lingenisa inzuzo esikhathini esingaphansi magazini bill. Magazine of pachinko kolwazi igcwele iphumele inani elikhulu, kodwa okuqukethwe zihlukile.
futhi phakathi kwabo cishe, uthwebule Imininingwane izinto futhi ulwazi imodeli futhi kukhombisa ulwazi imbobo of pachinko emakhazeni isibe uthishanhloko kukhona into sesibe isihloko. Okokuqala, kule magazini ukuthi ulwazi imodeli isibe isifundo esithile, sihlala big hit okungenzeka kanye ukukhiqizwa Xintai, futhi waba nokwethenjelwa, ezifana ezihlukahlukene ulwazi umphumela ke sishicilelwe.
Ngaphezu kwakho konke, esimweni pachinko iyona kakhulu ijubane ukujikeleza we yen ayizinkulungwane lithunyelwe. Ngokuthi emgqeni emngceleni, kodwa izikhulu lo mugqa umngcele kuba, ngoba ukubaluleka kwamanani kumele ikhishwe ukubala amanani ahlukahlukene zezinombolo ezifana big hit okungenzeka kanye ematfuba ukushintshashintsha okungenzeka, kubalwa nzima.
Ngo wamakhaza pachinko ungaya kuphi, kodwa ngicabanga ukuthi isilinganiso ukuguqulwa ngamunye uhlukile, ngisho umngcele umugqa kuzohluka e izinga lemali. Kungenxa umagazini, kukhona indawo ikhiphe izinga wokuhlengwa ngokuhlukile emgqeni umngcele, sekuyinto elula kakhulu. Endabeni
slot machine iphesenti kuzoba into efanayo. Endabeni pachinko kusho ushintsho nail, njll, akukho idatha njengoba umshini enikezwa yokuhlukanisa umshini kuyahlukahluka. Nokho, embobeni, kusukela inombolo ukufakwa ukujikeleza zinqunywa, thina umshini yokuhlukanisa siyakucimeka.
kungcono yebo eduze 100%, kuyoba nenzuzo.
umqondisi ukuthembeka Yiqiniso, uma empeleni hit okungukuthi, omaziyo ulwazi kusengaphambili ufuna, kodwa ngoba kubalulekile ukuthi hit ukwazi imishini komugqa umngcele iyona engcono, lolu lwazi kungcono ukuya pachinko engqondweni Ngicabanga.
bese, is a professional Umagazini imicimbi kanye Ukwaziswa Xintai of pachinko emakhazeni isibe uthishanhloko. Lolu hlobo magazini Imininingwane Kimi, ngisho pachinko emakhazeni uhlangothi nami ukukhokha imali. Ngenxa yokuthi nazo yanciphisa inani lezehlakalo posted ukuze, wena uza kimi ngomcimbi noma nje ukuheha abathengi ufuna izenzakalo ukuba Khonza ngobuqotho. Imicimbi
kweqiniso lokuthi posted on umagazini yalolu hlobo Kuyaphawuleka ukuthi umcimbi kuwufanele kuhloswe for. Eduze emakhazeni pachinko kini, uma mina, zama ukuya kuhloswe ngaso izenzakalo ahlelwe.
kuka izenzakalo ukuthi ngokuvamile ifakwa ekhasini ekhaya, ngicabanga ukuthi isilinganiso ungaphakathi umcimbi okungenhla. Kulo magazini Imininingwane ndlela, nolwazi oluhlukile ukuthi kuba isihloko umagazini. Uma ulwazi imodeli webhizinisi, qiniseka ukuhlola umugqa umngcele, ulwazi pachinko emakhazeni kuyinto omagazini kuncike, zama qinisekisa ukubheka umcimbi.
kusukela iphuzu ezihlukahlukene buka, kungase kube kuhle bese uyazama ulwazi oluningi iqoqo.